Mpianatra ho mpitsabo: tsy hiasa raha tsy mahazo EPI | NewsMada
Mpianatra ho mpitsabo: tsy hiasa raha tsy mahazo EPI
Tsy hanohy ny asany intsony ireo mpianatra ho mpitsabo taona fahafito sy fahavalo eny anivon’ny tobim-pahasalamana sy ny hopitaly raha tsy ampy ny fitaovam-piarovana entina mandray ny marary (EPI). Saron-tava tsy manaraka ny fenitra FFP2 tokony hampiasana eny amin’ny toeram-pitsaboana no entin’izy ireo mikarakara ny olona raisina rehetra ka manahy sao mamindra ny tsimokaretina any amin’ny fianakaviany ireo mpianatra mpitsabo ireo, araka ny fanambaran’izy ireo, omaly, teny amin’ny HJRA. Tsy ny saron-tava ihany fa ny fitaovana rehetra no tsy ampy. Manampy trotraka koa ny tsy mbola fandraisana ny “prime de risqué” ho azy ireo tokony ho zo hisitrahana ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana.
Nanao fanambarana àry izy ireo, omaly fa “hampitsahatra ny asa rehetra eny amin’ny sampam-pitsaboana iandraiketany avy mandra-pahazo valin-teny mahafapo avy amin’ny tomponandraikitra”. Voalaza fa hoe “efa nisy ny fihaonana teo amin’izy ireo sy ny mpitantana ny minisiteran’ny Fahasalamana fa tsy nahitana vahaolana mivaingana”.
Manodidina ny 600 eo ho eo ny mpianatra ho mpitsabo, taona fahafito sy fahavalo manatanteraka asa eny amin’ny tobim-pahasalamana manampy ny mpitsabo eto Antananarivo.
Tsy ny « paramédicaux » ihany izany no mitaky ny hanampiana ny EPI hiatrehana ny valanaretina Covid-19 fa manamafy koa ny mpianatra ho mpitsabo, amin’izao fotoana izao. Lafo ny vidin’ny fitaovam-piarovana eny amin’ny farmasia, 4300 Ar ny vidin’ny saron-tava 3 pli iray izay namidy 600 Ar tamin’ny fotoana tsy nisian’ny Coronavirus. 5 000 Ar ny saron-tava FFP2 ary 8 000 Ar ny FFP3. Isaky ny adiny efatra no tokony soloina ny saron-tava ho an’ny olona rehetra mifanerasera amin’ny marary.
Cité des 67Ha: actions contre le Covid-19 14/07/2020
Vatovavy: ouverture de la campagne de vanille 14/07/2020